emelitere ikpeazụ: Jul. 17 2019 | 2 min agụ
Noua bụ nke zuru okè oge maka agba azụ na-anụ ụtọ oge ndị enyi na ezinụlọ myiri. Ọ bụ na-zuru okè oge iji na-enweta ụfọdụ fun, ọ bụghị gị ọsọ-nke na-awa osisi ụbọchị. Lelee ise a pụrụ iche Noua ụbọchị na echiche na-na-agwụ n'ime oké echeta oge mgbe okpomọkụ na-ama esịn.
Canoeing Adventures: Ọ bụrụ na e nwere ihe a osimiri ma ọ bụ nnukwu ọdọ mmiri dị ebe n'ime ụgbọala anya, e nwere ihe a mara ezigbo mma ohere na e nwekwara a ntụpọ àjà-eji ụgbọ epeepe (ma ọ bụ KAYAK) a na-ebiri. Ọtụtụ n'ime ndị a na ulo bụ nanị oghe n'oge okpomọkụ, otú ijide n'aka ka akwụkwọ gị njem dị anya oge tupu oge eruo na ị gaghị ekwe ka a na-ndakpọ olileanya na-alọta na otu ọnọdụ na-ahụ ihe niile nke dị ụgbọ mmiri na-ama enyocha maka ụbọchị. Ọtụtụ mgbe saịtị dị ka Groupon nwere azụmahịa maka ndị dị otú ahụ a na-ebiri na-, otú azọpụta ego site na-eji otu n'ime ndị a na-enye nwekwara ike ịbụ a ga-ekwe omume. Mkpọ a picnic nri ehihie na waterproof containers na-ma gị na ụbọchị ọma nri gị n'oge njem.
Frisbee ma ọ bụ Obere Goofu Ịma Aka: Gbanwee otú n'ọchịchịrị Bowling uzo warawara n'oge okpomọkụ ma họrọ otu n'ime ndị a fun golfing nhọrọ kama. Ezie Obere golf nēche na-a "dị mma" oke maka onye ọ bụla-ejighị n'aka nke ya / ya egwuregwu ikike, ihe athletically ọchịchọ nwere ike na-achọ ime a ohere na lelee a Obodo Frisbee goofu N'ezie. Ọ bụghị nanị na nke ma ihe ndị a zuru okè nke na-edebe ihere silences na n'ọnụ mmiri, ma ha na-emekwa oké ụzọ na-a obere nso gị ụbọchị dị ka ị na-enyere ha chepụta zuru okè na-etinye / atụba ụdị. Gwụsịa gị ụbọchị na a na-eme njem a Obodo snow cone nkịkara ụlọ-ọzọ azụmahịa a na nanị oghe n'oge Noua.
Dog Park AFỌ: Ọ bụrụ na ma gị na ụbọchị na-uchu nkịta hụrụ, e nwere ihe ọ dịghị mkpa ịhapụ gị canine enyi n'azụ dị ka ị gaba maka ihe n'uhuruchi nke fun. Ezie na ọ bụghị ihe ọhụrụ n'ihi ha ka ha ga-emechi n'oge oyi ọnwa, ọtụtụ obodo nkịta n'ogige ntụrụndụ na-emeghe n'oge Noua. Ọ bụrụ na ọ kwe omume, ijide n'aka na-agụ online reviews na nnyocha ọ bụla nke kpọmkwem iwu maka otu nkịta ogige n'ihu ewega nkịta na ụbọchị ha. Ọ bụrụ na ọ dịghị nkịta n'ogige ntụrụndụ iyi ga-emeghe nọ n'ógbè gị, ị na-ahọrọ ka ịtọọ oge a nkịta-eje ije ụbọchị gị ịrịba ama ndị ọzọ nwekwara ike ịbụ a fun ọzọ nhọrọ kama. Na-elekọta ga-tinyere mmezi mmiri na-onye ọ bụla comfortably jụụ ma hydrated n'oge ị ụbọchị.
N'èzí Ụlọ ihe nkiri mgbede: Were uru nke na-ekpo ọkụ ná mgbede ma na-amụta a bit ihe banyere gị na mpaghara nkà idaha. Ọtụtụ obodo na-enye free ma ọ bụ belata ahịa maka tiketi n'èzí ụlọ ihe nkiri ihe, na egwú sitere na site egwú na-Shakespearean nkiri na-ekwe ukwe concerts. Obodo na ìgwè ndị agha na-na-mgbe na-arụ na-egosi na dị iche iche n'èzí ebe n'oge okpomọkụ nakwa. Ọ bụrụ na ọ dịghị n'èzí n'ịrụ nkà nhọrọ ka ihe ga-dị n'ógbè gị, tụlee ele anya bụla mbanye eme fim, ụlọ kama; ọ bụ ezie na ọ bụghị ihe fọrọ nke nta otu dị ka a ndụ arụmọrụ, ụgbọala-na ụlọ ihe nkiri ka nwere otu onye na-adịghị agafe agafe àgwà ha.
Geocaching: Ka a na-nyochawa bụghị ọrụ na-na-nanị ejedebeghị okpomọkụ, a mma ohere nke mma ihu igwe ga-afụ ụfụ gị ohere nke inwe fun n'oge a Geocaching ụbọchị. Borrow a GPS nrụtụ usoro si a enyi ma ọ bụ na-eji gị ama inyere gị search, na nnyocha obodo geocaches tupu na-amalite gị ụbọchị. Jide n'aka na-eme ka ndị a na-atọ ụtọ ihe maka gị na ụbọchị na-ahapụ na cache!